Foodie တွေ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အစာအိမ် | The Restaurant Guides for Myanmar
Foodie တွေ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အစာအိမ်
အစာအိမ် အနာရှိသူ တွေအနေနဲ့ မတည့်တဲ့အစာစားမိရင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အလွန်အမင်း ဗိုက်အောင့်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရင်ပူနာ၊ ပျို့တာ၊ အန်တာနဲ့ လေပွတာတွေက မိမိနဲ့ မတည့်တဲ့ အစာစားမိတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုဒဏ် ကြာရှည်စွာ ခံစားနေရပြီး အစား အသောက်ရှောင်ရှားခြင်း မရှိပါက အစာအိမ် ကင်ဆာကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေး မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒါ့ကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းနေစဉ် စားရမယ့် အစားအစာနဲ့ ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာတွေကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစာအိမ်လမ်းကြောင်း လုပ်ဆောင်ချက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီစေရန် အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားစွာပါသော အစားအစာတွေကို စားပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အစာအိမ် ရောင်ရမ်းနေစဉ် စားသောက်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့
အဆီများသော အစားအစာများ၊ ဆီများများနှင့် ကြော်ထား သော အစားအစာတွေကို မဖြစ်မနေ ရှောင်ရှားကြရပါမယ်။ ဆားအလွန်များသော အစားအစာများ၊ ပူစပ်သော အစားအ စာများ၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် သနပ်အမျိုးမျိုးကို မစားသင့်ပါဘူး။ ဗီနီဂါနှင့် ဗီနိုဂါရည်ပါဝင်သော အစားအစာများကို ရှောင်ရှား ပါ။
ကဖိန်း၊ အရက်ပါသော ဖျော်ရည်များ၊ စီးထရစ်အက်စစ်ပါ သော ဖျော်ရည်များနှင့် မုန်ညင်းနက်အဆီတို့ စားသုံးခြင်းကို ရှောင် ပါ။ အအေးများသောက်ခြင်းက အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုအတွက် အ ထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟု တလွဲထင်မှတ်ထားကြသော်လည်း အမှန်တကယ်မှာ အထောက်အကူမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
ပန်းသီး၊ ကရန်ဘယ်ရီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီတို့ကဲ့သို့ ရောဂါကာကွယ်ပေးသော ဓာတ်များမြင့်မားစွာပါဝင်သည့် အစား အသောက်များကိုစားပါ။ အမဲသား၊ ငါးကြော်နှင့် ဝက်သားတို့ကဲ့သို့ အသားများကို အ လွန်အကျွံစားသောက်ခြင်း ရှောင်ပါ။
နွားနို့ပါသော ဖျော်ရည်၊ ချဉ်အောင်လုပ်ထားသော ခရင်မ် များ၊ ချိစ်နှင့် ရေခဲမုန့်တို့ကဲ့သို့ နို့ထွက်ထုတ်ကုန်များကို ရှောင်ပါ။ ချောကလက်များစွာပါသော ကွတ်ကီးများ၊ ထောပတ်ဘီစ ကွတ်၊ ကိတ်မုန့်များ၊ ဒိုးနပ်စ်များ၊ ချောကလက်ကိတ်မုန့်များနှင့် အခြားဖုတ်ထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ပါ။
ဗိုက်အလွန်တင်းအောင် မစားပါနှင့်။ ကျက်အောင်ချက်ထား သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားပေးခြင်းက သင်၏ အစာအိမ် ရောင်ရမ်းမှုအတွက် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
၁။ အက်စစ်ပါဝင်မှုနည်းသော သစ်သီးများ
သစ်သီးတွေမှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အစာအိမ်အနာရှိသူတွေ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အက်စစ် ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ သစ်သီးတွေက ဝေဒနာကို ပိုဆိုးရွားစေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ကီဝီသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ပန်းသစ်တော်၊ ဘယ်ရီသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သင်္ဘောသီးနဲ့ သခွားမသီးတွေက အက်စစ်ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် အစာအိမ်အနာရှိသူတွေ စားသုံးသင့်တဲ့ သစ်သီးတွေပါ။
ပျားရည်က ချိုပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယား ကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျားရည်ဟာ H-Pylori ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာအိမ်အနာကို ကုသဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာ ထခါစမှာ စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ ပျားရည်ကို သောက်ပြီး ဗိုက်အောင့်တာနဲ့ တစ်ဇွန်း သောက်ပေးပါ။
၃။ Cruciferous အမျိုးအစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဘရိုကိုလီ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်လာဥဝါလိုမျိုး Cruciferous အမျိုးအစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျက်ပြယ်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ ဆာလဖာသတ္တုဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ် များစွာ ဝမ်းမချုပ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်အတွင်း လူ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ပွားများနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
သင်ရဲ့ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား တွေ များစွာ ရှိနေတာက အစာအိမ်အနာရှိသူရော၊ မရှိသူအတွက်ပါ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်စားသုံးတာက လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား တွေကို များစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅။ အဆီပါဝင်မှုနည်းသော နို့နှင့် အဆီ မပါသော အသား များ
ဗိုက်နာမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အစာအိမ်အနာကျက်ဖို့အတွက် ပရိုတင်းကို စားသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသားတွေမှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အဆီ မပါတဲ့ အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကြက်သားနဲ့ ဆိတ်သားတွေကို စားပေးပါ။
ကြက်အရေခွံနဲ့ ဝက်ခေါက်လိုမျိုး အဆီပြင်တွေက အစာအိမ်အနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတာကြောင့် စားသုံးသင့်ပေမယ့် အဆီ ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အမျိုးအစားကို စားသုံးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
Read 333 times.
ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလို့ ချောကလက်ပေးကြတာလဲ???
အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက ဘာများလဲ?
ဘယ်အစားအစာတွေက သင့်အစာအိမ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တာလဲ?